निर्माण सामाग्री विक्रेता महासंघको सरकारलाई प्रश्न, के पुन: निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको कुनै भूमिका हुँदैन ?
| 2016-05-13 Published
निर्माण सामाग्रीको क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका युवकराज राजभण्डारी निर्माण क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम होइन । नेपालमा अटो क्षेत्रपछि राजस्व बुझाउनेमा निर्माण सामाग्री विक्रेता नै रहेको दावी गर्ने महासंघले सरकारले पुनः निर्माणमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको बताएको छ । निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरीयता र यसको परिमाणको विषयमा लामो समयदेखि व्यवस्थित हुनुपर्दछ भन्ने छलफलमा संलग्न हुँदै आएका उनै भण्डारीसँग निर्माण मिडियाले राज्य पुनः निर्माणमा होमिएको अवसरमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश निर्माण सञ्चार,
महासंघ अहिले के–कस्ता काममा व्यस्त छ ?
चौथो वर्षमा रहेको महासंघमा हालसम्म १३ जिल्लाका जिल्ला संघका साथीहरु संलग्न भएका छन् । हामी सम्पूर्ण जिल्लामा जिल्ला संघको लागि तयारी गर्दै छौं ।
हालसम्म २५ जिल्लाका प्रतिनिधि साथीहरु संलग्न भइसकेको महासंघले भुकम्प र नाकाबन्दी पछि अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गरे झैं यसका कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।
भूकम्प पछि सरकारले पुनः निर्माणको कार्य थालनी गरिसकेको छ । सरकार र व्यवसायीबिच पुनःनिर्माणमा कसरी सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ?
निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्माण सामाग्रीका बारेमा सरकार बेखबर भएको हो कि झैं लागेको छ । निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र परिमाणका सम्बन्धमा हामीले धेरै अगाडि देखि बहस चलाउँदै आएका पनि छौं ।
निर्माण सामाग्रीको मूल्य सुचीका बारेमा उपभोक्ता सचेत हुन पाउनु पर्ने र यसको परिमाणका सम्बन्धमा पनि व्यवसायी र उपभोक्ताका बीच चेतनाको विस्तार हुन जरुरी ठानेको छु तर राज्यले लिएको यत्रो महाअभियानमा हामीलाई वेवास्ता गरेको हुँदा व्यवसायी साथीहरु निरुत्साहित भएका छन् तै पनि हामी हाम्रो कर्तव्य र दायित्वमा जिम्मेवार छौं ।
बजारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव देखिएको छ । यो कतै कृतिम अभाव त होइन ?
हो, सामानको उत्पादनभन्दा बढी माग भएकाले पनि बजारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव देखिएको छ ।
भूकम्पका कारण ७ लाख भन्दा बढी संरचना एकै पल्ट बनाउनु पर्ने र उत्पादनको क्षमतामा खासै वृद्धि नभएकाले पनि निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको हो । हाल विभिन्न देशबाट निर्माण सामाग्री आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
निर्माण सामाग्री व्यवसायीका अहिलेका समस्या केके हुन् ?
समस्या धेरै छन् । मुल समस्या भनेकै बजारमा सामाग्रीको अभाव हो । त्यसमा पनि विभिन्न अवस्थाले अभाव सृजना हुन्छ र आरोप सिधै व्यवसायीलाई लगाइन्छ । निर्माण सामाग्री उत्पादक कम्पनीहरुको भ्याट बिलिङको सिस्टम नै गलत भएको कारणले पनि हामी व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आएका छौं ।
सरकारले भ्याटका नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने निर्माण सामाग्रीबाट अहिले उठेको भन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्न सक्छ । व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र भ्याटको कार्यान्वयनका लागि महासंघ सरकारलाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर छ ।
त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, युगको माग अनुसारको विकास नीति नहुनु अर्को समस्या हो । अटो सेक्टर पछि दोस्रो कर तिर्ने र देशभर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा पाँच लाख भन्दा धेरैलाई रोजगारी सृजना गरेको निर्माण सामाग्री विक्रेतालाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ ।
अबको परिवर्तन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै तपाईंहरुसँग हातेमालो गर्न निर्माण सञ्चार आएको छ ? कस्तो अनुभव भएको छ ?
पक्कै पनि हामीमा खुसीको सीमा छैन । हाम्रा आवाज र समस्यालाई सरकार र जनताका बीचमा पुर्याउन लागि लागि परेको निर्माण सञ्चारलाई हामी सबैले सबल बनाउनु छ— यसको प्राकृतिक प्रकोप सचेतना अभियानमा सरिक बनेर ।
अबको समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि विकास निर्माणका बहस र त्यसको कार्यान्वयनमा तपाईं हामी जुट्नु छ तब मात्र समुन्नत नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । निर्माण सञ्चारले हरेक निर्माण व्यवसायीको भावना समेट्न सकोस् र पुनः निर्माणको सारथी नै निर्माण सञ्चार बनोस् ।
प्रस्तुतिः ऋषि खतिवडा
प्रकाशितः ३१ वैशाख, ०७३